सुविधाको गाडी परिवारलाई आफू ट्याक्सीमा – Sourya Online
सुविधाको गाडी परिवारलाई आफू ट्याक्सीमा
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १८ गते १:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लीला पाठक सुविधाको गाडी हुँदाहँदै ट्याक्सी चढेर कार्यालय ओहोरदोहोर गर्छिन् । आयोगले दिएको गाडी न उनले फिर्ता गरेकी छन् न त चढ्ने गरेकी छन् ।
आयुक्तले पाउने सुविधाअन्तर्गत डा. पाठकलाई बा.५च ४२९३ नम्बरको स्यान्ट्रो दिइएको थियो । सो गाडी कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने आयोगलाई जानकारी छैन । स्रोतका अनुसार आयोगको गाडीमा १० महिनादेखि पाठकका परिवार र आफन्तले मस्ती गरिरहेका छन् । जबकि तेलखर्च भने पाठकले आयोगबाट नियमित बुझ्ने गरेकी छन् । सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको विषयमा आलोचना हुन थालेपछि आयोगले ७ वैशाखमा उनलाई पत्र काटेको थियो ।
‘उहाँले गाडी चढ्नुभएको छैन र ड्राइभर पनि लिनुभएको छैन,’ आयोगका सचिव विशाल खनालले सौर्यसँग भने, ‘कि गाडी प्रयोग गर्नुहोला कि कार्यालयमा बुझाउनुहोला भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
पाठकका लागि आयोगले खटाएको ड्राइभर सन्तबहादुर लामाले एक वर्षअघि राजीनामा दिएपछि उनले अर्को ड्राइभर लिन मानेकी छैनन् । स्रोतका अनुसार डा. पाठकले सुविधाबापत लिएको गाडी उनका परिवार र आफन्तले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्छन् । पाठकले महिनामा एक सय ५० लिटर पेट्रोलको पैसा भने लिँदै आएकी छन् ।
आयोगले चार महिनाअघि पनि गाडीको सदुपयोग गर्न उनलाई ध्यानाकर्षण पत्र थमाएको थियो । उनले त्यो पत्र कार्यकक्षमै च्यातेकी थिइन् । पछिल्लोपटक गाडीकै विषयमा आयोगले अर्को पत्र काटेको साता बितिसक्दा पनि न उनले गाडी चढ्न थालेकी छन् न त आयोगलाई बुझाएकी छन् । यस विषयमा डा. पाठकको प्रतिक्रिया लिने प्रयास सफल भएन । सौर्य प्रतिनिधिको पटक–पटकको फोन सम्पर्कमा पनि उनी बोल्न चाहिनन् ।
पत्र पठाएको झोकमा उनले गत आइतबार दिउँसो कार्यालयमै आयोगका सचिव खनाल र कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहारसमेत गरेकी थिइन् । पाठकले खनाललाई भ्रष्टाचारी, चोर, डाँका, फटाहा, खातेजस्ता शब्द प्रयोग गरी गाली–बेइज्जत गरेको एक कर्मचारीले बताए । त्यस विषयमा सम्झाउन खोज्दा अन्य कर्मचारीमाथि पनि उनी जाइलागेकी थिइन् ।
गाडीको विषयमा आयोगका सचिव खनालले पत्र काटेपछि डा. पाठकले सचिवलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरीसमेत हालेकी छन् । यता, कर्मचारी भने कार्यालयमै विनाकारण गाली, बेइज्जत गरेकामा सार्वजनिक मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘विनाकारण हामीले किन गाली–बेइज्जत खेप्नुपर्ने ? हामी सार्वजनिक मुद्दा हाल्ने सोचमा छौँ ।’
नियमानुसार आयोगको गाडी लिएपछि कि आफैँले हाँक्नुपर्छ कि आयोगकै ड्राइभर राख्नुपर्छ । पाठकका लागि ड्राइभर नरबहादुर घर्तीलाई तोकिए पनि उनले राख्न मानेकी छैनन् ।
शक्तिको पछाडि विकास कुद्ने परम्पराले पछाडि पर्यौँ : मन्त्री झाँक्री
माधव नेपाल र प्रचण्ड हटेपछि एमालेमा खुशी छाएको छ : अध्यक्ष ओली
दाङको लमहीमा टाटा सुमो दुर्घटना, ९ जना घाइते
सुर्खेतको सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, दुई जना घाइते
अमेरिकामा गोल्डस्टार ब्रान्ड
ग्लोबल आईएमई बैंकको तीन नयाँ शाखा
एलआईसी नेपालको स्वतन्त्र सञ्चालकमा मोलरी
कृषि बैंकको सेयर रजिस्ट्रारमा एनआईबीएल एस क्यापिटल
हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत् दिन स्विचिङ स्टेसन सञ्चालनमा
मुक्तिनाथ विकास बैंक सम्मानित
बढ्यो निगमको घाटा